China MILLED FLATS ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Akụkọ
Mmepụta Hot akpọrepu / Hot esorowo Ngwá Ọrụ Steel akpụzi Steel
.Dị Ewepụghị efere
Ọkwa P20,1.2311, P20HH, 718,718H, MAKA
NKE165, NZE16, JZ2, NY
SUS302, NKE304, SUS430
Ọkọlọtọ JIS, DIN, ASTM, GB
Efere Efere ọkpụrụkpụ: 8-800mm Obosara: 8-800mm
Elu Ala ma ọ bụ Ihe Igwe
Ngwá ọrụ ígwè bụ ụdị nchara eji eme ka oyi na-anwụ, ihe na-ekpo ọkụ na-anwụ anwụ, na-anwụ anwụ na-anwụ na ndị ọzọ na-anwụ. Ngwá ọrụ ígwè bụ ihe ndị bụ isi na-arụ ọrụ maka imepụta akụkụ na ngalaba mmepụta ihe dịka imepụta igwe, ngwa redio, motọ, ngwa eletriki, wdg.
Ọdịdị nke nchara ígwè ọrụ na-emetụta ogo nke teknụzụ nhazi nrụgide, izi ezi nke ngwaahịa a, ọnụ ahịa mmepụta ya na ọnụahịa mmepụta ya. Ogo na ọrụ ndụ nke ebu na-tumadi emetụta ngwá ọrụ ihe onwunwe na okpomọkụ ọgwụgwọ na mgbakwunye na nke ezi uche bughi imewe na nhazi ziri ezi.
Anyị na-enye mma kachasị mma iji mezuo njedebe nke njedebe, usoro ndị a na-ebelata ọnụahịa mmepụta ma melite arụmọrụ maka nrụpụta
Nke gara aga: HSS CIRCULAR SAW UM UBARA
Osote: Plastics ebu ígwè
Hot Work Steel gbapụtara Ewepụghị Ogwe
Hot Work Ngwá Ọrụ Steel gbapụtara Ewepụghị Ogwe